Home » Critic » ညငှက်အထီးကို မြင်ဖူးပြီ
Posted by alinsett on Aug 4, 2016 in Critic, Environment, My Dear Diary | 37 comments
အပိုင်း (၁) အိမ်ယာမဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြောင့်ချက်
နှစ်ခါက သုံးခါ ဖြစ်လာတော့ ရပေါက်ရလမ်း ကောင်းတာရယ်. . .ကောင်းတာရယ်. . .(အဲ ဘာပါလိမ့်။ )
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူလည်း ယောကျာ်းဖျာသယ်လေး ဖြစ်မှန်း သိသိ ဖြစ်သွားရောာာတဲ့။
အင်း အိမ်ပြန်ရင် အဲ့နားတွေ ညဘက် သွားပြီး လပ်လျား လပ်လျား နေတာတွေ ရှောင်မှဘာ….
ကိုယ်ကလဲ ရုပ်ကလေးက ချော နေတာနဲ့ ငှိ ငှိ ငှိ…
သောက်ရူး ဆိုပြီး ပါးမချသွားရင် ကျေးဇူး တင်ရမယ်
ခုခေတ် အဲ့လို ကောင်လေးငယ်ငယ်ချောချောတွေ အများကြီး
ဈေးကွက်က အစကတည်းကရှိတယ်။ ငါက ငါ့အလုပ်နဲ့ငါနော် လူချောဆိုတာတော့သိတယ် အာ့လိုမဟုတ်ဘူး ဟိဟိ။
စိန့် ရုပ် စိန့်ရည်နဲ့ အဲ့အလုပ် ရမရ အဲ့သငယ်ကို ပြောပေးပလား အကို့
စိန်တို့ မိုးမာမီတို့ သများတို့ကတော့ မရီးစန်းတို့ မရီးထက်တို့ လိုင်းထဲ ဝင်ရင် ပို သင့်တော်မလားဟေ
ညှီတီတီစာလေးတွေချည်း စုစည်းထားတဲ့ ဂျာနယ် ထုတ်ဖို့ တွေးထားလေသလား
ကိုရင်က.. တန်းစီအိပ်တာလေး.. ဇာချဲ့ပြနေတယ်…။
ဒါက.. သမိုင်းမှတ်တမ်း ဖြစ်ကျန်ရစ်မှာလေ..။
အဆောင်နေ လူငယ်များ၏ ဘဝ ဖြတ်သန်းမှု များ ဆိုပြီးလား
နာ ပြန်ပြီးတော့ စထေးး မမဂျီးများ အတွက်သီးသန့် လူငယ်လေးတွေချည်း ဝန်ထမ်းရှိမဲ့ ကလပ် ဖွင့်ရင် ကောင်းမားး
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဆိုတာ စံနစ်ကျတဲ့ စောင့်ရှောက်မှု့တွေနဲ့ တရားဝင်ရှိသင့်တာပါ..
ဟုတ်တယ်နော်။ တရားဝင် စနစ်တကျ ရှိသင့်ပြီ။
တောင်မြောက်လမ်းစုံဘက်မှာ နှစ်ဖက်ချွန်ဘဲပြောရမလား ဘာလာလာဒေါင်းတဲ့သူတွေရှိတယ် တဲ့ အသိအစ်မတစ်ယောက်ပြောပြတာ သူကအဲဒီနာမှာအဲဒါတွေရှိမှန်းမသိဘဲ Taxi တားတာတဲ့ Taxi တွေကလွတ်ရဲ့သားနဲ့ဘာလို့မရပ်သလည်းမသိခဲ့ဘူးတဲ့ နောက်မှ သူငှားလာတဲ့ကားသမားပြောပြမှအကြောင်းစုံသိရတယ်တဲ့ ကြားကာစကအဲလိုနှစ်မျိုးရ ညငှက်ထီးတွေရှိတာ အရမ်းအံ့သြသွားတယ်
ဘာလာလာဒေါင်းတဲ့သူတွေကို ဂျိုကာလို့ ခေါ်တယ်ဆိုလား။
ဒီလိုယောက်ျားပြည့်တန်ဆာတွေအကြောင်းကို ၁၉၇၅ပါတ်ဝန်းကျင်လောက် က ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ပုပ္ပါးကိုကိုဇော်ဆိုတဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ဈေး မှာယောက်ကျာ်းလေး နှင်းဆီပန်းကိုင်နေတာမျိုး တစ်နေရာမှာ ခုံတစ်လုံးချပြီးထိုင်နေတာမျိုး အကျီအိပ်ကပ်ထဲ နှင်းဆီပန်းထည့်ထားတာမျိုးစတာတွေနဲ့ သိနိုင်တယ်ပြောတယ် ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာ ယောကျာ်းအဟွှာတွေ ရှိတယ်လို့တော့ ကြားဖူးခဲ့တာပဲ လေးပေါက်နဲ့ foolish girl ရေ။
အမလေး . . . ငါ့နှယ် ပိန်းချက် . . . ညငှက်ထီး ဆိုတော့ ငါက တကယ့်ငှက်လို့ ထင်သွားတာ . . .
Bus ပေါ် မှာ ထောက်လှမ်းရေး တွေ ရှိ သလို၊ ပေါက်ဆီ သည်တွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်လေ။
.ဘတ်စ်ပေါ်မှာ နောက်ကျောကို ပေါက်စီနဲ့ဖိ သတ်တာ ခံရဖူးတယ်။
၁ ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စား စရာ ၂/၃/၄/၅ ကို ဆက် စောင့်ဖတ်ဦးမယ်
.ပြောစရာလေးတွေ ရှိသေးလို့ အပိုင်း ၂/၃ ထိ ရေးဖြစ်မယ် ထင်တာပဲ(ထင်တာပဲ)
ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကွင်းဆင်းထားတာတွေများလားဟယ် အဟေးးးးး စတာဘာ စဒါဗာ စသာဘာ
ဒါက အပိုင်း(၁) ဆို တော့ (၂) တွေ (၃) တွေရှိသေးတယ်ပေါ့
ရှိသေးတယ်။ ပြောချင်တာလေးတွေ ရှိသေးလို့ ၂တွေ ၃တွေ လာမယ်။
ရုံးကအကိုကြီးလဲ သူ့ဆရာနဲ့အတူ လောင်းဘူးပါတယ်တဲ့ မြို့ထဲတစ်နေရာမှာ အကျီ င်္လက်ရှည်အဖြူ နဲ့ရပ်နေ